သေစေနိုင်သောအပြာရောင်ဝေလငါးဂိမ်းကိုသတိပြုပါ။ | Androidsis
Francisco Ruiz | | Android ဂိမ်းများ, NOTICIAS, လုံခွုံရေး
ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြသောနာမည်အောက်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောဂိမ်းအကြောင်းသင်ကြားဖူးပါသလား။ ကျွန်ုပ်မသိပါ "အပြာရောင်ဝေလငါးဂိမ်း"ကမ်းခြေသို့ချဉ်း ကပ်၍ ကမ်းခြေတွင်သောင်တင်နေခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေလိုသည့်လူသိများသောတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်၊ ယဉ်ကျေးသောကမ္ဘာ၏ဆယ်ကျော်သက်လူ ဦး ရေအပေါ်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေသည်.
ရုရှားနိုင်ငံမှလာသည့်ဂိမ်းသည်ရုရှားကိုယ်နှိုက်နှင့်အခြားနိုင်ငံများအကြားအာဂျင်တီးနား၊ ပီရူးနှင့်ချီလီတို့ကဲ့သို့သောအထူးသဖြင့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့နေသောစပိန်နိုင်ငံနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာအန္တရာယ်ရှိနေသောကြောင့်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အပျက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တစ် ဦး သည်ဘာစီလိုနာဆေးရုံ၏စိတ်ရောဂါကုသရေးဌာနသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပြင်လုံးတွင်အနာများနှင့်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်။ လူမှုရေးအရကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သင်သည်သင်၏တူများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အသေးအဖွဲသံသယသို့မဟုတ်အပြုအမူကိုနိုးနိုးကြားကြားရှိစေရန်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြလိမ့်မည်။ မင်းနဲ့အတူနေတဲ့မင်း
သူငယ်ချင်းCárdenas Europa FM မှနံနက်တိုင်းထုတ်လွှင့်သောLevántate y Cárdenasအစီအစဉ်တွင်ပြောကြားသကဲ့သို့ "နောက်ဆုံးမှာတော့လူသားဟာသူ့မိုက်မဲမှုကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်"နှင့်ဤဖြစ်ပါတယ် အန္တရာယ်ရှိအပြာဝေလငါးဂိမ်း ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းသတိရှိရှိရှိနေပြီးစမ်းသပ်မှု ၅၀ အနက်မှအမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှုများကိုသာပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးနှင့်သေစေလောက်သောအဆောက်အအုံ၏ထိပ်မှခုန်ချခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းပါဝင်သည် ။
ဒီဂိမ်းကိုယ်နှိုက်ကစမ်းသပ်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်ရမယ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင်ပိုပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်ဤကိစ္စသည်စည်းမျဉ်းကိုအတည်ပြုသောခြွင်းချက်အနည်းငယ် မှလွဲ၍ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်အလွန်ငယ်ရွယ်သောလူတစ် ဦး အဖြစ်အဆုံးသတ်သောပါ ၀ င်သူများ၏သတ်သေမှုနှင့်အဆုံးသတ်သည်အထိဖြစ်သည်။
သူတို့ရေးစပ်ထားတဲ့၏စမ်းသပ်မှု အပြာဝေလငါးစိန်ခေါ်မှုဂိမ်း ၎င်းတို့သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အလွန်ဆင်တူသော်လည်းဘုံပိုင်းခြေတွင်ပါဝင်သူအားဤဖြစ်ရပ်တွင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုမိမိ၏ဆန္ဒကိုလက်အောက်ခံရန်ဖြစ်သည်။ "အုပ်ထိန်းသူ" o "စောင့်ရှောက်သူ" ဤဆယ်ကျော်သက်များ၏အကြောင်းမဲ့နေကြသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုကြီးကြပ်၏တာဝန်ခံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်သင်ကအဖြစ် macabre သက်သေပြ ဓါးအစွန်းအပြာဝေလငါး tattoo ကိုရယူပါ, (ဤသည်များသောအားဖြင့်ပထမဆုံးပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်), လက်၏သွေးပြန်ကြောများတွင် transverse ဖြတ်သုံးခုပေမယ့်ရေတိမ်ပိုင်းအနက်မှာလုပ်ပါသင်၏နှုတ်ခမ်းများသို့မဟုတ်အပ်များကိုသင်၏လက်၌ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ နံနက် ၄:၂၀ နာရီတွင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်နံနက် ၄:၂၀ နာရီတွင်အိပ်ရာပေါ်သို့တက်ခြင်းတို့သည်ဤအန္တရာယ် ၅၀ ခု၏စမ်းသပ်မှုများသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှု ၅၀ တွင်ပြူတင်းပေါက်တစ်ခုသည်အဆောက်အ ဦး တစ်ခု၏ခေါင်မိုးပေါ်မှပျက်ပြယ်သို့ခုန်ချခြင်းဖြင့်ပါဝင်သူသေဆုံးခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်သည်။
အမှန်တရားကတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကဆယ်ကျော်သက်တွေအများကြီးဟာသူတို့ဂိမ်းတစ်ခုလိုချင်တဲ့နေရာမှာအလွယ်တကူကျဆင်းနေတာကိုစိုးရိမ်စရာပါ။ အပြာဝေလငါးဂိမ်း, သူတို့ရဲ့ညာဘက်စိတ်တွင်အဘယ်သူမျှမလူသားတွေအစဉ်အဆက်ဖျော်ဖြေဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်သင့်ကြောင်း။
ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရှိလူငယ်များကိုများသောအားဖြင့်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရဆွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုသင်ဆန့်ကျင်ပြီးခေတ်မမီတော့တဲ့အရာအားလုံးဟာမင်းအတွက်အေးအေးဆေးဆေးပဲ ပြီးတော့ပုန်ကန်မှုအဆင့်ကိုဆက်လက်ပြသခြင်းကကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ဒီအရူးလူ့အဖွဲ့အစည်းကချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင်ဘယ်လိုဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲဒီအချိန်တုန်းကသင်နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဆက်ပြီးပြသဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးမှ Androidsis မှကျွန်ုပ်တို့စာဖတ်သူများအားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစာဖတ်သူများအားအထူးသတိထားစေလိုပါသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအား Android tablet များ၊ စမတ်ဖုန်းများသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများဖြင့်နေ့စဉ်ကစားခွင့်ပေးသောမိဘများ။ ဒါပမေဲ့အံ့သွတာကလညျး၊ အင်တာနက်နောက်ကွယ်ရှိအန္တရာယ်နှင့်အနည်းငယ်သတ်ဖြတ်သောစာမျက်နှာများကိုနောက်ကွယ်မှမှားယွင်းစွာခေါ်ဆိုလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့အနှစ်သက်ဆုံးသတ္တဝါများကိုသက်ရောက်သည်အထိကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုင်းများကို ဖြတ်၍ ခိုးဝင်သောကြောင့်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တံခါးကိုမခေါက်ပါ။
ဒါကြောင့် သင့်ကလေးများသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘာလုပ်သည်ကိုစောင့်ကြည့်နေပါသူတို့၏အဆက်အသွယ်စာရင်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များ၌မည်သို့သောမိတ်ဆွေများရှိသည်၊ ထိုထက် ပို၍ ကိုယ်ခန္ဓာအားရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှု၊ အကျင့်များ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » အပြာဝေလငါးဂိမ်းအတွက်သတိထားပါ !!
ငါသူတို့လုပ်ရင်ဒီကိစ္စဟာထူးခြားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာ bullimg ပြproblemနာရှိမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဗူးထဲမှာတစ်ခုခုမှားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ဂရုစိုက်ပြီးဖန်တီးသူက AIA တစ်ယောက်က yandere ထက်ခေါင်းထဲမှာမှားနေတာကိုငါ ၀ မ်းသာတယ်၊ ရုရှား
Xiaomi သည်အနာဂတ် ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်အထူးလျှော့စျေးများဖြင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်